Smartphone - The Comparison
Zụrụ otu ibe n'ime igbe FX1N-2EYR-ES Ul akwụkwọ ikike otu afọ Fx8N2Eyres Ul
1 ibe n'ime igbe FX2N-8EYR-ES Ul akwụkwọ ikike otu afọ Fx2N8Eyres Ul Anyị nwere ahịrị 200.000 na ngwaahịa ma nwee ike ibuga na ụbọchị azụmaahịa 1-3.; Anyị na-enye ọrụ nkwakọ ngwaahịa ọkachamara maka ndị ahịa. 82,83 EUR Chips Gate, tọrọ ntọala na 2010, bụ ngwá ọrụ ...
Zụrụ ELLENS Ekwentị 3G akpọchiri akpọchi, Android 9.1 Octa-Core 2GB Ram + 32GB ROM, Igwefoto 8MP + 2MP, SIM Dual 6.35inch Full Screen
Ekwentị ELLENS Unlocked 3G, Android 9.1 Octa-Core 2GB RAM + 32GB ROM, 8MP + 2MP Camera, Dual... 82,84 EUR Ekwentị ekwentị dị ọnụ ala na-eji ihe ngosi ihuenyo zuru oke nke 6,35 inch na arụmọrụ ngwa anya dị mma, nke na-eme ka ọ nwee ike inye gị ihe ngosi. ahụmahụ...
(*5*) Swisstone SD (*8*) 12,7 cm (5″) 1 GB 8 GB Dual SIM Black 2000 mAh – Ama (12,7 cm (5″), 1 GB, 8 GB, 5 MP, Android 7.0, Black )
Swisstone SD 510 12,7 cm (5 ") 1 GB 8 GB Dual SIM Black 2000 mAh - Smartphone (12,7 cm (5"), 1 GB, 8 ... Ọrụ gps na-enyere aka (a-gps) 82,90, XNUMX EUR Ọrụ GPS enyemaka (a-gps) Ekwentị ndị ọzọ na-atọ ụtọ:...
Zụrụ FOLOSAFENAR NP-F990T Igwefoto batrị 7800mAh Ike 2.1A ugbu a chaja Ụdị C Plastic na igwe igwefoto batrị maka ekwentị mkpanaaka
Site na ngosipụta ike, ị nwere ike ịhụ ikike batrị fọdụrụnụ. Nchaji ọgụgụ isi anaghị emebi batrị, na-akwado ịchaji ngwaọrụ dị iche iche, dị ka igwefoto na batrị ekwentị mkpanaaka, wdg. Nchekwa okpomọkụ, ọkụ ọkụ ... .
Zụrụ XGGYOOG Android Smartphone na-enweghị nkwekọrịta, 512 MB + 4 GB na-agbasawanye ruo 128 GB, Nzube ihu CPU Dual-Core iji kpọghee ekwentị mkpanaka/Black / 4.7 inch HD ihuenyo.
XGGYOOG Android Smartphone enweghị nkwekọrịta, 512 MB + 4 GB na-agbasawanye ruo 128 GB, Nchọpụta ihu... 82,99 EUR 4,7-inch HD ihuenyo: mkpebi nke 480 x 854 pikselụ. Agba ndị ahụ doro anya na ọdịiche dị elu, na-enye gị ahụmahụ ọhụụ ...
Zụrụ XGGYOOG Android Smartphone na-enweghị nkwekọrịta, 512 MB + 4 GB gbasaa ruo 128 GB, Dual-Core CPU Facial Recognition to Unlock Cell Phone/ Blue/ 4.7 inch HD Ihuenyo.
Ntinye ndị ọzọ »
Peeji na Peeji ndị ama ama